Renirano lava indrindra eto an-tany: ny fifandirana misy eo amin'i Neily sy i Amazon | Fitsangatsanganana tanteraka
Renirano lava indrindra eto an-tany
Ny renirano lava indrindra eto an-tany dia mety tsy ilay eritreretintsika rehetra rehefa nanontaniana an'izany isika. Na, farafaharatsiny, tsy izy irery. Satria siansa tsy vita ny fanekena momba an'io, na ny critères tokony harahina amin'ny fanapahana azy aza.
Azo antoka fa raha milaza ianao hoe iza no renirano lava indrindra eto an-tany, dia nanondro ianao Amazon. Ary tsy ho diso tanteraka ianao. Na izany aza, ny ampahany tsara amin'ireo manam-pahaizana, izay miorina amin'ny toetra hafa, dia hilaza aminao fa izy ilay Neily. Ny zavatra manitikitika indrindra dia ny hoe samy marina daholo isika. Miankina amin'ny inona ny masontsivana iorenantsika ny tenantsika.
1 Fitsipika momba ny fanapahana izay renirano lava indrindra eto an-tany
2 Ny Neily, renirano lava indrindra manerantany amin'ny halavany
2.1 Farihy Victoria
2.2 Ny tohodranon'i Aswan
2.3 Tanànan'i Meroe taloha
2.4 Ny Lohasahan'ny Mpanjaka
3 Ny Amazon, renirano lehibe indrindra eto an-tany amin'ny fikorianan'ny rano
3.1 Ilay Amazon
3.2 Iquitos, Amazonis Peroviana
3.3 Manaus, renivohitr'i Amazonas
3.4 Belém, fidirana mankany Amazon
Fitsipika momba ny fanapahana izay renirano lava indrindra eto an-tany
Priori, mety ho mora ny mametraka ny refin'ny renirano. Ampy izay ny fakana ny toerana nahaterahany sy ny vavany ary handrefesana ny halavirana. Na izany aza, tsy mora akory ny mametraka ireo fetra ara-batana ireo. misy ny ireo tributera izay miditra hanangana fantsona tokana. Noho izany dia sarotra ny manondro mazava hoe aiza no manomboka ny ony.
Ho fanampin'izany, raha misy manampahaizana manokana miankina amin'ny fitsipiky ny ny halavany, ny hafa manao azy amin'ny fijerena ny fikorianany. Izany hoe ao anaty rano metatra toratelo izay alefany ao anaty ranomasina. Raha ny fitsipika no jerena, raha te hametraka iza no renirano lava indrindra eto an-tany, dia toa azo itokisana kokoa ny mason-tsivana voalohany. Na izany aza, miaiky ny roa tonta.
Noho izany, ny tsara indrindra azonay atao dia ny manolotra anao data rehetra mifandraika amin'ireo renirano roa voalaza mba hahafahanao mamorona ny hevitrao manokana. Ary, eo anelanelany, satria mifandray amin'ny dia ao amin'ny Malagasy, hasehonay anao ny sasany amin'ireo toerana tsara indrindra nandalovan'izy ireo.
Ny Neily, renirano lava indrindra manerantany amin'ny halavany
Araka ny efa nolazainay taminareo teo dia tsy mazava ny toerana nahaterahan'i Neily. Fantatra fa manao izany ao amin'ny tanzania andrefana ary manam-pahaizana maro no mametraka ny niandohany tao amin'ny farihy Victoria. Saingy satria ny reniranon'ity farihy lehibe ity dia misy renirano, dia misy mpahay siansa mahita ny loharanon'ny renirano ao Reniranon'i Kagera, ny zana-kazo lehibe indrindra.
Ity olana ity dia misy ifandraisany satria, amin'ny tranga voalohany, ny renirano afrikanina lehibe dia mety hanana halavana 6650 kilometatra. Saingy, amin'ny faharoa, izany hoe, raha raisina ho toerana nahaterahana ny Kagera, dia handeha izany 6853 kilometatra.
Mba hamaranana ny zavatra sarotra, ity sampana colossus ity dia manana rantsana roa. Ny voalohany dia ny antso Neily fotsy, firenena nahaterahany Rwanda ary hamakivaky ny faritra Great Lakes. Ho an'ny ampahany, ny faharoa dia ny Neily manga, izay teraka ao amin'ny farihy tana, ny lehibe indrindra amin'ny Ethiopia, ary mandalo Sodàna manatevin-daharana ny voalohany akaikin'ny renivohitr'ity firenena ity, Khartoum.
Farany, miondrika atsimo atsinanan'ny Ranomasina Mediterane izy ka mamorona ilay antsoina hoe Delta Nile rehefa avy nandia firenena folo. Fa ankoatr'izay, ny ony afrikanina dia kely kokoa ny onja noho ny Amazon. Izany dia manome 200 000 metatra toratelo eo ho eo mankany amin'ny Ranomasimbe Atlantika, raha mitondra rano be kosa i Neily enim-polo latsaka. Ary i Amazon koa dia midadasika kokoa, satria amin'ny lafiny lehibe indrindra dia mahatratra iraika ambin'ny folo kilometatra ny sakany.
Etsy ankilany, araka ny efa nampanantenainay anao, dia hanoro anao ny sasany amin'ireo toerana tsara indrindra Azonao atao ny mitsidika ny moron'ny reniranon'i Neily.
Miaraka amin'ny kilometatra toradroa efa ho fitopolo kilometatra, izy no farihy lehibe indrindra faharoa manerantany aorian'ny Superior, in Canadá. Ahitana firenena telo ny morony: Tanzania, Oganda y Kenya ary nahazo ny anarany avy amin'ny mpanjakavavy Fandresen'i Angletera.
Miaraka amin'ny fanitarana toy izany, lozika fa manana zava-mahatalanjona voajanahary. Mba hanomezana ohatra anao dia holazainay ny Murchison Falls na Kabalega, izay an'i Oganda ary nahatonga ny valan-javaboary. Izy ireo dia setrin'ny riandrano telo lehibe izay mahatratra telo metatra efapolo metatra ny haavony.
Ny tohodranon'i Aswan
Na dia tsy tsangambato voajanahary aza izy io dia miresaka momba io tohodrano io noho ny maha-zava-dehibe azy ho an'ny fantsakan'i Neily. Raha ny marina dia misy tohodrano roa izy io, ny avo sy ny ambany. Fa ny tena mahavariana dia ny voalohany, natsangana tamin'ny taona XNUMX.
Asa lehibe momba ny injeniera izay natao hanakanana ny ony tsy hisondraka. Ny habeny goavambe dia hanome anao hevitra ny amin'ny fandrefesany saika efatra kilometatra ny halavany y efa ho folo amby zato ny halavany. Raha ny hatevin'ny fotony, dia efa ho iray kilometatra.
Mba tsy hahavery azy ireo dia tsangambato maro tao an-toerana no tsy maintsy nafindra alohan'ny nanatanterahana ny asa. Anisan'izany, ny Tempolin'i Debod, nafindra tany Madrid. Fa koa an'ny Ramses II sy Dendur, naterina tany Khartoum sy New York.
Tanànan'i Meroe taloha
Any amin'ny Sodàna, renivohitr'i Fanjakan'i Kush, iray amin'ireo roa mandrafitra ny taloha Nubia. Ny fisiany dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-350 talohan'i JK, saingy nopotehina tamin'ny taona XNUMX am.fan.ir. Na izany aza, ny sisa tavela amin'ny rindrina dia voatahiry, ny Lapan'ny mpanjaka, ny tempolin'i Amona lehibe ary zaza tsy ampy taona hafa. Tsy dia mahavariana tahaka ireo faritra ejiptiana izay horesahintsika manaraka izany, saingy manana sandan'ny arkeolojika goavambe.
Ny Lohasahan'ny Mpanjaka
Eo amoron'i Neily ihany koa ny sasany amin'ireo tsangambato manan-danja indrindra eto an-tany: ny an'i Egypte taloha. Anisan'ireny, ireo izay hita ao amin'ny Lohasahan'ny Mpanjaka dia misongadina, izay mivadika miaraka amin'ny Thebes archaic napetraka napetraka Lova eran-tany.
Ny lohasaha dia voaforon'ny fasan'ny farao isan-karazany amin'ny Fanjakana Vaovao ary tena akaiky azy ireo no mahatalanjona tempolin'i Luxor sy Karnak, ary koa ilay antsoina hoe Lohasahan'ireo mpanjakavavy, miaraka amin'ny fasan'ireny nofongarina tao anaty vatolampy ireny. Tsy misy isalasalana, izy io dia iray amin'ireo fampisehoana goavana indrindra eo amoron'i Neily, izay ahitanao ireo fahagagana maro hafa, fa izao dia hifantoka amin'ny Amazon isika.
Ny Amazon, renirano lehibe indrindra eto an-tany amin'ny fikorianan'ny rano
Amin'ny lafiny iray, Amazon dia somary fohy noho i Neily, saingy ny lavany koa dia iharan'ny resabe. Tsy mitovy hevitra ireo mpanao sary miaina hydrographiana.
Araka ny voalazan'ny United States National Park Service, ny Amazon dia manana halava 6400 kilometatra. Na izany aza, ny Ivon-toeran'ny Jeografia sy ny statistika Breziliana dia namoaka fanadihadiana taona maro lasa izay izay nanambarana fa ity renirano lehibe ity dia avy any atsimon'i Peroa fa tsy any avaratra, araka ny tombana hatreto. Miaraka amin'izany, ny Amazon dia nahazo halava hatramin'ny Neily. Saingy mbola velona ny fifandirana ary ny ankamaroan'ny mpahay siansa dia mbola mihevitra ny reniranon'i Afrika lava kokoa.
Na ahoana na ahoana, raha tsy refy ny halavany dia refesina no refesina, dia resin'i Amazon indray i Neily.Fa ny teo aloha, araka ny efa nolazainay, ny renirano lehibe any Amerika atsimo dia mikoriana mankany Atlantika. 200 000 metatra toratelo isan-tsegondra. Ary, mikasika ny sakan'ny, ny Amazon dia refesina amin'ireo faritra lehibe ao aminy 11 kilometatra. Raha atao teny hafa, ny iray dia zara raha hita avy amin'ny morontsiraka iray.
Etsy ankilany, tahaka ny nataontsika tamin'ny Neily, dia hasehonay anao ny sasany amin'ireo toerana tsara indrindra azonao jerena ao amin'ny fantsakan'ilay renirano lehibe any Amerika atsimo.
Ny habetsaky ny rano entin'ny ony dia tompon'andraikitra amin'ny fananan'ny renirano ala be indrindra eto an-tany antsoina hoe marina. Amazon. Havokavoka marina ho an'ny tany ary misy sanda ara-tontolo iainana tsy hita isa samy noho io antony io ary satria manana harena sy zavamananaina be dia be.
Na dia ao anatin'ny Fahagagana voajanahary fito eto amin'izao tontolo izaoMampalahelo fa tandindomin-doza nandritra ny taona maro ny tontolon'ny tany amerikana noho ny fiasan'ny multinationals multinationals lehibe sy noho ny antony hafa.
Iquitos, Amazonis Peroviana
Io no tanàna lehibe indrindra amin'ny Amazon peroviana iray manontolo ary vonona handray mpitsangatsangana. Mampalahelo fa io no iray amin'ireo toerana lehibe niantsoana azy Tazo fingotra nanimba ny ankamaroan'ny faritra izany.
Ao anatin'izany dia afaka mitsidika ny tsara tarehy ianao Katedraly, fahagagana neo-Gothic natsangana tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX. Ary koa ny Casa del Fierro, Cohen ary Moreyary koa ny antitra Palace Hotel, fomba mahavariana art deco. ny Kianja lehibe, izay ahitanao ny Obelisk to the Heroes.
Manaus, renivohitr'i Amazonas
Avelantsika hampiasa teny ity na dia lojika aza, tsy renivohitry ny ala tropikaly Amazon ity tanàna ity, fa an'ny fanjakana Breziliana Amazon. Raha ny tena izy dia eo afovoan'ny ala no misy azy ary ny anarany dia fanomezam-boninahitra nataon'ny mpanorina Portiogey ny Indiana Manaus, izay avy aminy.
Ny ivon-toerany dia ny Kianja San Sebastian, aiza ny sarobidy sy manafatra Teatra Amazonas. Manoro hevitra anao ihany koa izahay mba hitsidika ny ivon-toerana manan-tantara, miaraka amin'ireo tranony marobe miorina amin'ny Rubber Rush; ny Tsenan'i Adolpho Lisbon, miaraka amin'ny tantara zato taona mahery, ary ny Ivon-kolontsain'ny Vahoakan'i Amazon, tranombakoka mahatalanjona momba ireo foko nonina ilay ala mikitroka hatramin'ny andro taloha.
Amazonas Theatre, any Manaus
Belém, fidirana mankany Amazon
Ity tanàna Breziliana ity dia heverina ho iray amin'ireo tanàna lehibe vavahady mankany Amazon, satria eo am-bavan'ny ony io. Izy koa dia renivohitry ny faritra Breziliana ao Pará ary manana tanàna taloha feno lapa sy tranombakoka mirehitra izy.
Nasongadin'izy ireo ihany koa ny Catedral Metropolitana, firavaka klasika ary ny Castle an'ny Tompo Santo Cristo de Presépio de Belém. Ankoatr'izay, ny Tsenan'ny Ver-o-Peso dia hahafahanao milentika amin'ny fiainana andavanandro amin'ny tanàna sy ny Valan-javaboary Margal de las Garzas Mampiseho anao ny karazam-borona anaty rano an-jatony. Farany, aza adino ny mitsidika ny Zaridaina Botanical an'i Rodrígues Alves, aingam-panahy avy amin'ny Bois de Boulogne an'ny Paris amin'ny endriny, fa miaraka amin'ny karazana flora.
Ho famaranana ary miverina amin'ny adihevitra momba ny renirano lava indrindra eto an-tany, holazainay aminao izany, amin'ny halavany no Neily. Saingy, amin'ny alàlan'ny volavola, Amazon dia naka ny lohateny. Na izany na tsy izany, samy manana ny sisiny izy ireo fahagagana maro hanolotra anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Renirano lava indrindra eto an-tany
Ny niandohan'ny tranomboky